ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော မျိုးစိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော မျိုးစိတ်
ဟာဝေယံကျီးကန်း မျိုးစိတ်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဒေသရင်းနယ်မြေ၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော မျိုးစိတ်များ ( Extinct in the Wild - EW ) ဆိုသည်မှာ ဇီဝမျိုးစိတ်တစ်ခု (ဝါ) တစ်စုသည် သုတေသနဌာနများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ အစရှိသော နေရာများမှ ဖမ်းဆီးမွေးမြူထားသော အကောင်ဦးရေသာကျန်ရှိပြီး ဒေသရင်းနယ်မြေများတွင် မတွေ့ရှိတော့ကြောင်း (သို့) ၎င်းတို့ ပေါက်ရောက် / ရှင်သန် ကျက်စားရာနယ်မြေများ ကြီးမားစွာဆုံးရှုံးသွားခြင်းကြောင့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နေထိုင်ကျက်စားခဲ့သော တောရိုင်းသဘာဝဒေသရင်းနယ်မြေ ပြင်ပသို့ ဦးရေအကုန်ရောက်ရှိသွားကြောင်းကို နိုင်ငံတကာ သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း(IUCN)မှ ၎င်းမျိုးစိတ်အပေါ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဆင့်အတန်း အမျိုးအစားသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ 
ဂူအမ်းပိန်းညင်းငှက် (Guam kingfisher) သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဒေသရင်းနယ်မြေတွင် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။
၁ သာဓက ဖြစ်စဉ်များ
၂ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၏ ပကတိတန်ဖိုး
၃ ဒေသရင်းနယ်မြေများသို့ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း
အာဖရိကမှ ဆိတ်သမင်မျိုးဖြစ်သော ငှက်ကြီးတောင် အိုးရဇ် (Oryx dammah ) မျိုးစိတ်သည် ဒေသရင်း၌မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော မျိုးစိတ်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒေသရင်းနယ်မြေများ၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည့် မျိုးစိတ်နှင့် မျိုးစိတ်ခွဲများအား သာဓကအနေနှင့်ဖော်ပြရမည်ဆိုပါက -
Alagoas curassow (၁၉၈၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း၌ ၎င်းငှက်များ ရှင်သန်တည်ရှိနေမှုကို မျက်မြင် အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အစီရင်ခံခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစကာ ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော မျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။)
Cachorrito de charco palmal (အဆိုပါ ငါးမျိုးစိတ်အား ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်၌ ဒေသရင်းနယ်မြေတွင် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ် သွားခဲ့သည်)
Escarpment cycad (အပင်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကတည်းက ဒေသရင်း၌မျိုးသုဉ်းသွားသည့် မျိုးစိတ်စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။)
Franklinia (ပန်းပင်မျိုးစိတ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၈၀၃ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၌ ဤစာရင်းသို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်) 
Golden skiffia (ငါး မျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် ကတည်းက ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ် သွားခဲ့သော စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။) 
Guam kingfisher (၁၉၈၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဒေသရင်း၌မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော ပိန်ညင်းငှက် မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။) 
ဟာဝေယံ ကျီးကန်း (၂၀၀၂ ခုနှစ်၌ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၎င်းဟာဝိုင်ယီဒေသ၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်) ၎င်းဟာဝေယံ ကျီးကန်းအချို့အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်ထားသော အဖွဲ့များမှ ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များတွင် ဒေသရင်းသို့ ပြန်လည်ထားရှိပေးထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Kihansi spray toad (၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ ဒေသရင်းတွင် မျိုးသုဉ်းသွားသော ဖားပြုတ်မျိုးစိတ် ဖြစ်သည်။)
မြောက်ပိုင်းကြံ့ဖြူ (ဒေသရင်း၌မျိုးသုဉ်းရန် အလွန်နီးစပ်နေသော အာဖရိကကြံ့မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းမျိုးစိတ်၏ အမ နှစ်ကောင်သာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။)
ပနားမား ရွှေရောင် ဖား (ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းနိုင်သော ဖားပျံ မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။)
Père David's deer (စီကာသမင်နှင့် မျိုးရင်းတူ သမင်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
“ ဒေသရင်း၌မျိုးသုဉ်းပြီး မျိုးစိတ်အားလုံးသည် အရေအတွက်အလွန်နည်းကာ ရှားပါးနေခြင်းမျိုး မဟုတ်ကြပေ။ ဥပမာအနေဖြင့် Brugmansia ဟုခေါ်သော ပန်းပင်မျိုးစုသည် ၎င်း၏မျိုးစိတ် (၇)မျိုးလုံးအား ဒေသရင်း၌ ပြန်လည်ကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးကြသော်လည်း ရှင်သန်နိုင်မှု မရှိတော့သည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးအရောင်းဆိုင်များတွင်မူ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ၍ ရနိုင်နေလေ၏။ ”
စကားလုံးကြီးကြီးမားမားသုံး၍ ဖော်ပြရလျှင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဂေဟစနစ် လည်ပတ်မှုမှန်ကန်စေရေး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုသည် ထိန်းသိမ်းမွေးမြူမှု၌သာ ရှင်သန်နိုင်တော့မည်ဆိုပါက ထိုမျိုးစိတ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် သူ့ဘာသူ မတည်ရှိနိုင်တော့၍ ဂေဟစနစ်၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားမှုဖြစ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဒေသရင်းနယ်မြေများသို့ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း (en: Reintroduction) ဆိုသည်မှာ ဇီဝမျိုးစိတ်တစ်ခုအား သီးခြားစောင့်ရှောက် မွေးမြူထားသော နေရာ (သို့) ထိုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့် အချိန်ကာလ၌ ၎င်းတို့ ရှင်သန်နေနိုင်သော အခြားဒေသရင်းမဟုတ်သည့် နယ်မြေများမှ ၎င်းတို့၏ မူလ တောရိုင်းသဘာဝ နယ်မြေဒေသများသို့ ပြန်လည် ပေါက်ရောက် ကျက်စား ရှင်သန်နိုင်ရန် ထားရှိပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်လည်း မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းရမည့် ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာ အမူအကျင့် အပြုအမူများ စသည့် ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော နည်းပေးလမ်းပြမှုများ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ (ဥပမာ - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ကြောင်ပေါက်တစ်ကောင်သည် ငယ်ဘဝတွင် မိခင်ဖြစ်သူ ကြောင်မ ထံမှ သားကောင်ဖမ်းနည်း(ကြွက်ခုတ်နည်း) မသင်ယူခဲ့ရလျှင် ၎င်း၏ သခင်ဖြစ်သူ လူသားမှ အစာမကျွေးပါက သားကောင်ကို ရှာဖွေအမဲလိုက်တတ်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ကြောင်မျိုးရင်းဝင် အားလုံးသည် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်၏။)
↑ ၃.၀ ၃.၁ 2001 IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1။ IUCN။ 19 March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Alagoas Curassow (Mitu mitu)" (7 August 2018). IUCN Red List of Threatened Species7August 2018. IUCN.
↑ "Stenodus leucichthys" (2008). IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T20745A9229071.en.
↑ Donaldson, J.S. (2010). "Encephalartos brevifoliolatus". IUCN Red List of Threatened Species 2010. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T41882A10566751.en.
↑ "Franklin Tree (Franklinia alatamaha)" (3 February 2015). IUCN Red List of Threatened Species3February 2015. IUCN.
↑ "Golden Skiffia (Skiffia francesae)" (18 April 2018). IUCN Red List of Threatened Species 18 April 2018. IUCN.
↑ "Guam Kingfisher (Todiramphus cinnamominus)" (October 2016). IUCN Red List of Threatened Species October 2016. IUCN.
↑ "Hawaiian Crow (Corvus hawaiiensis)" (October 2016). IUCN Red List of Threatened Species October 2016. IUCN.
↑ 'ALALĀ RELEASED INTO NATURAL AREA RESERVE။
↑ Rare Hawaiian crows released into native forests of Hawai'i Island။ 24 October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Five more alala released into Puu Makaala Forest Reserve (October 2018)။
↑ "Nectophrynoides asperginis" (25 July 2014). IUCN Red List of Threatened Species 25 July 2014. IUCN.
↑ Emslie, R. (2020). "Northern White Rhino". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN. old-form url
↑ 'Last wave' for wild golden frog (2 February 2008)။
↑ "Père David's Deer (Elaphurus davidianus)" (31 March 2016). IUCN Red List of Threatened Species 31 March 2016. IUCN.
↑ Extinct in the Wild but Still Around:5Plants and Animals Kept Alive by Humans။ ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA။
IUCN အနီရောင်စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော မျိုးစိတ်များ စာရင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒေသရင်း၌_မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော_မျိုးစိတ်&oldid=727901" မှ ရယူရန်
ဒေသရင်း၌ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသော မျိုးစိတ်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။